जनव्यथा समेटिएको गीत : एउटै काखमा हुर्केथ्यौं हामी (भिडियो पनि)
नारायण शर्मा | चैत १३, २०७६ बिहिबार | 0
समय यतिबेला निकै निष्ठुर बनिरहेको छ । कोभिड–१९ अर्थात कोरोना भाइरसका कारण सम्पूर्ण मानव जगत भयभित र पीडित बन्दै गइरहेको छ । यो भाइरसबाट विश्वका लाखौँ मानिस सङ्क्रमित भइसकेका छन् । हजारौँको संख्यामा मानिसको ज्यान गइसकेको छ । सङ्क्रमणले विकराल रूप लिन नपाओस् भनेर विभिन्न देशले लकडाउन घोषणा गरेका छन् । हाम्रै देश नेपाल पनि यति बेला लकडाउनमा छ । जो जहाँ छ, त्यहीँ सुरक्षित तबरले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
देशका विभिन्न शहर र परदेशका विभिन्न देशमा रोजगारीका लागि पुगेका कतिपय मानिस यतिबेला आफ्नै गाउँघर फर्किएका छन् । तर अझै लाखौँलाख नेपाली आफ्नो गाउँघरभन्दा निकै टाढा परदेशी भूमिका छन् । यो महाविपत्तिका बेलामा पनि उनीहरू आफ्नो गाउँघर फर्कन सकेका छैनन् । आफ्ना जहानबालासँगसँगै बस्न पाएका छैनन् । कोरोना भाइरसको त्रास एकातफँ छँदैछ, अर्कोतर्फ, आफ्ना बुबाआमा, जहानबाला र आफन्तजनको चिन्ताले सताइरहेको छ । जीवनमा समय यस्तो विकराल रूप लिएर आउला भन्ने शायदै कसैले कल्पना गरेको थियो होला । तर आएको छ । परदेशका विभिन्न देशमा र स्वदेशकै पनि विभिन्न शहरमा आफ्नो घरपरिवारसँग छुट्टिएर बस्न बाध्य हरेक नेपालीको मनमा यतिबेला जनगायिका निलिमा पुनले आफ्नो नयाँ गीति कोसेलीमा भने झैँ यी भावना सलबलाइरहेको होला–
एउटै काखमा हुर्केथ्यौँ हामी
समयले के लेख्यो कहानी ?
जनगायक जीवन शर्माको युट्युब च्यानलबाट २०७६ चैत्र ७ गते सार्वजनिक भएको उक्त गीतमा निष्ठुर समयका कारण आफ्नो घरपरिवारसँगबाट टाढा बस्नुपर्दाको यथार्थ व्यथा समेटिएको छ ।
गीतले हरेक नेपालीको कथालाई समेटेको छ । गीत मूलतः दाजुबहिनीको बिछोडको व्यथामा आधारित छ । एउटै घरमा जन्मिएका भाइबहिनी समयक्रमसँगै टाढा टाढा हुनु हामी सबैको बाध्यता हो । सानोमा एउटै काखमा हुर्किएको, दाजु रोजीरोटीका लागि रोजगार खोज्दै परदेशी भूमिका पुग्छ, बहिनी पराइघर । पराइघर र परदेशी भूमिमा काम गर्दाका आ–आफ्नै पीडा छन् । दाजु परदेश र बहिनी पराइघर गएपछि घरमा वृद्ध बाबाआमा एक्लै पर्छन् । वृद्ध आमाबाबाका पीडा पनि दर्दनाक छन् । जन्मायो, हुर्कायो, वृद्ध अवस्थामा जब आफूलाई सहाराको आवश्यकता पर्छ, त्यो बेला सन्तान आफ्नो अगाडि हुँदैनन् । नेपालीजनको घरघरमा पाइने तिनै व्यथालाई समेटेर आएको छ, जनगायिका निलिमा पुनको नयाँ गीति कोसेली ‘एउटै कामा हुर्केथ्यौँ हामी‘ले ।
दाजु परदेश म पराइघर
बाबाआमाको कोही छैन सहारा
पराइघरमा पुगेकी बहिनीले आफ्ना वृद्ध बाउआमालाई यसरी सम्झिएकी छिन्, गीतमा । उनका दाजु बाध्यताको भुमरीमा परेर परदेशी भूमिमा पुगेका छन् । देशभित्रै रहे पनि बहिनीमा आफ्ना जन्मदाता बुबाआमाको चिन्ता सलबलाइरहेको हुन्छ । यता, बहिनीको मनमा मात्र होइन, उता परदेशमा रहेको दाजुको मनमा पनि तिनै वृद्ध बुबाआमाको पिर, चिन्ता दौडिरहेको हुन्छ ।
परदेश जाने रहर होइन
घर चलाउने आय भएन
बाउआमाको ख्याल गरी बहिनी
घरको खबर पठाए मलाई नि
आफ्ना वृद्ध बुबाआमा, आफ्नो गाउँघर चटक्क छाडेर परदेशिने रहर कसलाई हुन्छ र ? कसैलाई पनि हुँदैन । तर यहाँको बाध्यता यस्तै छ । देशभित्रै गाउँघर नजिक रोजगारीको कुनै अवसर छैन । खेतबारीको उब्जनीले मुश्किलले ६ महिना खान पुग्दैन । यसरी बाध्यताको भुमरीमा परेर लाखौँलाख नेपाली परदेशी भूमिमा पुगी आफ्नो रगत–पसिना बगाउन बाध्य छन् । तिनै नेपालीको यथार्थ व्यथा बोकेर आएको छ, जनगायिका निलिमा पुनको नयाँ गीतिकोसेली ‘एउटै काखमा हुर्कियौँ हामी’ ।
गीतमा शब्द र सङ्गीत स्वयम् निलिमा पुनकै रहेको छ भने एरेन्ज झलक सङ्गीतमले गरेका छन् । निलिमा पुनलाई स्वरमा साथ दिएका छन्, रक्तिमका कुशल नृत्यकार कलाकार सुमन रोकाले । नौमति बाजाको धुनमा रहेको यो गीत साँच्चै नै कर्णप्रिय बनेको छ । गीतमा रक्तिमकै कलाकार सुजन थापा र हेमा श्रीसको लोभलाग्दो अभिनय देख्न सकिन्छ । बाल–कलाकार दीपिका थापा र साजन श्रीसको अभिनय त अझ आश्चर्यचकित पार्ने खालको रहेको छ । विनय थापा छन्त्यालले दृश्यको छायाङ्कन गरेका छन् भने सम्पादन तुलसी बाँसकोटाले गरेका छन् । गीतको छायाङ्कनमा निर्देशन रक्तिमका हस्ती डम्मर भण्डारीले गरेका छन् । गीतको छायाङ्कन बागलुङ जैमिनीको हाँडीकोट, राङखानी, बागलुङ–कुश्माको झोलुङ्गे पुल, पोखराको सराङकोट, औद्योगिक क्षेत्र र काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा गरिएको छ । जस्तो सुन्दर गीत छ, उस्तै सुन्दर दृश्य गीतमा देख्न सकिन्छ । प्रथम हाँडीकोट पर्यटन मेलाको दृश्यसमेत गीतिकोसेलीमा हेर्न सकिन्छ । रक्तिमका केन्द्रीय कलाकार टोलीको नृत्य, सिर्जनशील मगर बाजा समूह, जैमिनी पैयुँको नौमति बाजा समूहको प्रस्तुतिसमेत गीतिकोसेलीमा समेटिएको छ ।
समग्रमा गीत निकै आकर्षक र सन्देशमूलक बनेको छ । अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिसँग जुध्न यस गीतले केही मात्रामा भए पनि साहस थप्न सक्छ भनेर अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुने छैन ।
अहिले परिस्थिति अति नै प्रतिकूल छ । यो प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्नु सम्पूर्ण मानवजातिको यतिबेला साझा कर्तव्य हुन गएको छ । हामी सबैको एकीकृत प्रयासबाट यो विषम परिस्थिति अवश्य पनि नियन्त्रणमा आउने छ । हाम्रो ससानो गल्ती र असावधानीले भोलि झनै ठूलो विपत्ति र महामारी निम्तिन सक्छ । कोरोना सङ्क्रमणको कहरबाट मानवजातिलाई मुक्त गर्न स्वास्थ्यकर्मी अहोरात्र खटिरहेका छन् । सुरक्षाकर्मीले आफ्नै ज्यानको जोखिम मोलेर तपाई हाम्रो जीवनरक्षाका लागि काम गरिरहेका छन् । यो बेलामा हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको राज्यद्वारा जारी निर्देशनको इमान्दारितापूर्वक पालना मात्र हो । हो, हामी कैयौँ मानिस यतिबेला आफ्ना परिवार, आफन्त र गाउँघरदेखि टाढा, धेरै टाढा छौँ, छिन्नभिन्न अवस्थामा । जो, जहाँ छौँ, राज्यको निर्देशनको पालना गर्दै घरकोठाभित्रै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बसौँ । हामी त्यसरी घरभित्रै बसेको खण्डमा कोरोना सङ्क्रमणले अरू महामारीको रूप लिन पाउने छैन । घरभित्रैको यो फुर्सदिलो समयलाई सिर्जनशील काममा प्रयोग प्रयोग गरौँ । जीवन र जगतप्रति विश्वास र आशा जगाउने खालका साहित्यिक रचनाहरुको अध्ययन गरौ । यस्तै यस्तै सन्देशमुलक गीत र सङ्गीत, नाटक, चलचित्र र प्रहसनहरु हेरौं, सुनौं । आत्मबललाई अरु उच्च पारौ । निराश नबनौं । संयमित बनौं, धैर्यवान बनौं, सचेततापूर्वक सावधानी अपनाऔं । रत्तिभर पनि आतङ्कित नबनौं । बुझेकाले नबुझेकालाइ बुझाउँदै जाऔ । जीवन, जगत र परिवर्तनप्रतिको विश्वास दिलाउँदै जाऔं, जनगायिका निलिमा पुनले नया गीतिकोसेली ‘एउटै काखमा हुर्कियौ हामी’ मा भनेझैं ‘दुखी मन नबनाउ बहिनी विपत्तिमा साथ दिने मै छु नि ।’
गीत र सङ्गीत
दुबै : एउटै काखमा हुर्केथ्यौं हामी
बैनी: जन्मघर मेरो हो भन्थे
फूल रोपी आँगन सँजाउथें
दाजु : सधै खुशी हुनु है बैनी
पराई घर बिरानो लागेनी
बैनी : दाजु परदेश म पराई घर
बाउआमाको कोही छैन सहारा
दाजुः परदेश जाने रहर होइन
घर चलाउने उपाय भएन
बैनीः खुशी थिए आमाको साथमा
सम्झी रुन्छु अँधेरी रातमा
दाजुः बाउआमाको ख्याल गरे बैनी
बैनी : परदेशबाट घर फर्की आउनू
बुढेशकालका बाउआमा नरुवाउनू
दाजुः दुखी मन नबनाउ बैनी
विपत्तिमा साथ दिने मै छु नि
(शर्मा हाँक साप्ताहिकका सम्पादक हुनुहुन्छ ।)